Huafu Nylon-Piyona weNylon roller seti inogadzira
SeChina nyanzvi yekugadzira zvigadzirwa zveyiloni, Huafu ave achishanda mukugadzira mapuriyumu akasiyana-siyana enylon uye zvikamu kunyanya muzvigadzirwa zveyiloni zvakagadzirwa, Isu tanga tichiedza nepatinogona napo kupa mhinduro kune dzakasiyana dzehunyanzvi zvinodiwa nevatengi. Dorman Long Technology kambani iri ...
Nzira yekuchengetedza nylon mavhiri zuva nezuva?
ne admin pane 20-09-03
Nylon mavhiri ekisero uye anotenderera anotenderera mabheyari akazorwa mafuta uye akazorwa mafuta; mushure mekuisirwa, maekisero uye / kana chinogadziriswa manejimendi nzvimbo yepini dzakasungwa. Yese mvura yekuchenesa inoshandiswa haifanire kunge iine kukanganisa uye kukuya zvigadzirwa. Mutengi ane basa rekuchengetedza kwakakodzera uye ac ...
Nyorera yeNylon Zvikamu
ne admin pane 20-07-17
Nekuvandudzwa kwehupfumi hwepasi rose mumakumi emakore apfuura, kudikanwa kwezvigadzirwa zvenylon kwakawedzera zvakanyanya. Sechinhu chisingachinjike muzvigadzirwa zvepurasitiki, zvigadzirwa zvenylon zvakave zvichishandiswa zvakanyanya mumunda weinjiniya nekuda kwezvakanaka zvadzo Nylon (polycaprolactam) yave ...
Sechinhu chakakosha mumunda weinjiniya mapurasitiki, zvigadzirwa zvenylon zvave kushandiswa zvakanyanya mumishini, mota, midziyo yemagetsi, nemaindasitiri ekutaurirana. Pano, isu tinosuma zvakanakira nylon pulleys: 1. Yakakwira michina simba; kugadzikana kwakanaka; yakanaka uye yakasimba ...